अभियान : सभासदलाई चिठी लेख्नुस् - कोपिला - कान्तिपुर समाचार
अभियान : सभासदलाई चिठी लेख्नुस्
पुस १९, २०७१ प्रशान्त माली
भाइबहिनीहरू तपाईंहरूको अधिकारलाई नयाँ बन्ने संविधानमा सुनिश्चित गर्न बालबालिकाको राष्ट्रिय चिठी अभियान सञ्चालन भइरहेको छ ।
यस अभियानमा सबै जातजाति, भाषाभाषी, श्रमिक, अपांगता भएका हिमाल, पहाड, तराई जुनसुकै क्षेत्रका भाइबहिनीहरूले आफ्नो अधिकारलाई संविधानमा समावेश गराउन सभासदहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा चिठी लेख्न सक्नुहुनेछ । १८ वर्षमुनिका भाइबहिनीहरूको अधिकारलाई संविधानमा सुनिश्चित गर्न बालअधिकारका लागि काम गर्ने संघसंस्थाहरू लागि परेका छन् । तपाईंहरूले लेखेको चिठी सिविन-नेपाल नामक संस्थाले सभासदहरूलाई बुझाउनेछ ।
तपाईंहरूले लेखेको चिठी प्रतिवेदन बुधबार सिविन नेपालद्वारा स्टाफ कलेज जावलाखेलमा आयोजित एक समारोहमा संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्यौल समिति सभापति विष्णुप्रसाद पौडेल र सभासदहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
समारोहमा सभापति पौडेलले बालमैत्री संविधान बनाउन आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोञ्जन, खेलकुद लगायत आधारभूत आवश्यकता नयाँ बन्ने संविधानमा सुनिश्चित हुनुपर्छ, उनले भने । समारोहमा सिविन-नेपालका अध्यक्ष माधव प्रधानले देशैभरिबाट बालबालिकाले लेखेको चिठी कार्यालयमा आउनेक्रम जारी रहेको बताए । संविधानमा बालअधिकारको सुनिश्चितका लागि हामी प्रतिबद्ध भएर लागिरहेका छौ, उनले भने ।
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले शुभारम्भ गरेको अभियानमा कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके, सुर्खेत, रुकुम, दाङ, पर्वत, बाग्लुङ, म्याग्दी, कास्की, मोरङ, सुनसरी, रौतहट, मकवानपुर, काभ्रेपाञ्चोक, दोलखा र काठमाडौं गरी १८ जिल्लाका १२ हजार बालबालिकाले सहभागिता जनाइसकेका छन् । १ सय ७७ विद्यालय, ९३ संघसंस्था, २ सय बाल क्लब र १२ बालगृहले चिठी लेखेका थिए ।
प्रकाशित : पुस २०, २०७१ ११:४३
कथा : पानी उड्दो रहेछ
पुस १९, २०७१
शनिबार थियो । सिर्जना निकै खुसी थिइन् । खुसी नहुन् पनि किन ? सातासम्म स्कुल गएर एक दिन घरमा बस्न पाउनु पनि कम मजाको कुरा होइन ।
बाख्रा र पाठालाई माया गर्ने, टोलका साथीसँग मिलेर खेल्ने, नुहाइधुवाइ गरेर सफा हुने अनि घरको काममा आमा र बाबालाई सहयोग गर्ने अवसर यस्तै बिदाको दिनले दिने गर्छ । स्कुल जानु नपर्ने भएकाले सिर्जना घरमै आमासँग यताउता गरिरहेकी थिइन् । आमा कपडा धुन थाल्नुभयो । आमाले कपडा धुनुहुँदा उहाँलाई सहयोग गरूँ अनि त्यसपछि साथीहरूसँग खेलूँला सिर्जनाले सोचिन् । उनी पनि आमालाई कपडा धुन सघाउन थालिन् । कपडा पखाल्ने बेलामा उनी पानी हालिदिन्थिन् र कपडा निचोरेपछि अर्को भाँडोमा राखेर आमालाई सघाउँथिन् । केहीबेरपछि सबै कपडा धोइसकियो । उनी आमासँग मिलेर कपडा सुकाउन थालिन् । डोरीभरि कपडा भए । सिर्जनालाई हेर्दै रमाइलो लाग्यो । यी कपडा कसरी सुक्छन् होला ? कपडा सुक्दा पानी कहाँ जान्छन् होला ? उनी सोच्न थालिन् ।
आमा ! यो कपडा कसरी सुक्छ हाे ? सिर्जनाले आमालाई कोट्याउँदै सोधिन् । घामले सुक्छ छोरी ! आमाले भन्नुभयो । घामले कसरी आमा ? सिर्जनाले फेरि सोधिन् ।
आमासँग सिर्जनाले कुरा गरिरहँदा बाबा आइपुग्नुभयो । सिर्जनाको प्रश्न उहाँले पनि सुन्नुभएको थियो । उहाँले छोरीलाई च्याप्प समात्नुभयो, माया गर्दै भन्नुभयो छोरी ! तिम्रो प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र वैज्ञानिक पनि छ । यो प्रश्नको जवाफ आमाले वा बाबाले भन्दा पनि तिमी आफैले पाउने कोसिस गरे कस्तो हुन्छ ? सिर्जनालाई बाबाको कुरा राम्रो लाग्यो तर पत्ता लगाउने कसरी ? उनी सोच्न थालिन् ।
छोरी ! यो प्रश्नको जवाफ तिमी आफै पत्ता लगाउन सक्छ्यौ तर यसका लागि तिमीले एउटा प्रयोग गर्नुपर्छ, बाबाले भन्नुभयो ।
कस्तो प्रयोग बाबा ? म तिमील्ााई भन्छु , मैले भनेजस्तै गर र तिम्रो प्रश्नको जवाफ आफै पत्ता लगाऊ, हुन्न ? हुन्छ बाबा ! सिर्जनाले हाँस्दै भनिन् । सिर्जना बाबासँगै भान्साकोठामा गइन् । बाबाको सल्लाहअनुसार सिर्जनाले एक गिलास पानी भरिन् र ताप्केमा राखिन् । त्यसलाई चुलोमाथि राखेर तताउन थालिन् । पानी तात्दै गर्दा त्यसबाट बाफ आउन थाल्यो । छोरी ! यो के निस्केर उड्दै छ विचार गर है, बाबाले भन्नुभयो । यो त बाफ हो नि बाबा ! पानीबाट बाफ उड्दै छ । हो बाफ के हो भन्ने कुरा थाहा पाउन तिमीले एउटा ढकनीले यसलाई छोप त, बाबाले भन्नुभयो । केहीबेर ढकनीले छोपेर ढकनी उघारी हेर्दा ढकनीको भित्री भागमा पानीको थोपाथोपा देखियो ।
बाबा ! यो बाफ त पानी पो रहेछ । बाफ उड्यो भनेको त पानी उड्ने पो रहेछ, सिर्जनाले भनिन् । लौ अब आगो बन्द गर र तताएको पानी अघिको गिलासमा राख त, बाबाले भन्नुभयो । सिर्जनाले त्यसै गरिन् । अघि गिलासभरि भएको पानी अहिले त पिँधमा मात्र पो देखियो । छोरी ! हामीले तताउनका लागि भाँडोमा राखेको पानी यति नै हो त ? बाबाले मुसकुराउँदै सोध्नुभयो ।
कहाँ हुनु अघि त गिलासभरि थियो नि, अहिले त धेरै घटेछ, सिर्जनाले गिलास माथि उठाउँदै भनिन् ।
अहिले कहाँ गयो होला त छोरी ? बाबाले सोध्नुभयो । सिर्जना मुसुक्क हाँसिन् र केहीबेर बाबाको अनुहारमा हेरिरहिन् । उनले दायाँहातको औंला चिउँडोमा राखिन् ।
बाबा ! पानी त उडेर गएछ ।
कसरी उडेछ त छोरी ?
अघि तताएको बेलामा बाफ भएर उडेछ, सिर्जनाले जवाफ दिइन् ।
लौ त्यसो भए कपडा धोएर सुकाएपछि कसरी सुक्छ होला त यसबारे अनुमान गर्न सक्छ्यौ ? बाबाले सोध्नुभयो । यसको जवाफ पनि पाएँ बाबा !
के रहेछ त ? जब कपडा घाममा सुकाइन्छ तब घामको तातोले गर्दा कपडाभित्र भएको पानी तातेर बाफ बन्ने रहेछ जसरी अघि एक गिलास पानी तताएपछि बाफ भएर घट्यो । अनि कपडामा भएको पानी पनि त्यसैगरी उडेर सकिने रहेछ, सिर्जनाले जवाफ दिइन् ।
स्याबास छोरी ! राम्रोसँग उत्तर मिलायौ । अब तिमीले बिस्तारै बादल कसरी बन्छ ? पानी कसरी पर्छ भन्ने जवाफ पनि खोज्न सक्नेछ्यौ, बाबाले भन्नुभयो । सिर्जनाले कापी निकालिन् र केही लेखिन् । के लेखेकी छोरी ? आमाले सोध्नुभयो ।
आमा ! आज घरमा गरेको प्रयोग र आफूले पाएको उत्तर लेखेकी छु । भोलि स्कुलमा गएर गुरु र गुरुआमाहरूलाई यसका बारेमा सुनाउँछु, सिर्जनाले भनिन् । आमा ! हाम्रो बाबाले स्कुलमा पढाउनुभए कति मजा आउँथ्यो हकि ? सिर्जनाले आमाको हातमा समाउँदै भनिन् । किन र छोरी ? बाबालाई सिकाउन आउँछ । हेर्नुस् न कस्तो रमाइलो तरिकाले मलाई सिकाइदिनुभयो । म अरूहरूले पानी उड्छ भन्दा के भनेको होला भन्ने ठान्थें । आज आफैले पानी उडाइयो हा हा हा, सिर्जनाले हाँस्दै आमाको प्रश्नको जवाफ दिइन् । उनी एउटा नयाँ प्रयोग गरेर नयाँ कुरा सिक्न पाएकोमा निकै खुसी देखिन्थिन् ।
रंग भरौंको नतिजा
१५ सहिदको थलो
सफा भित्तो, विद्यार्थीको प्रतिष्ठा